धादिङ-नुवाकोट समाज युके को बार्षिक भेटघाट कार्यक्रम
August 12, 2018, 10:00 pm by लण्डन-काठमाडौँ सम्बाददाता
लण्डन । धादिङ र नुवाकोट जन्म भई बेलायतमा बसोवास गर्दै आएकाहरुको संस्था धादिङ–नुवाकोट समाज बेलायतले बार्षिक भेटघाट कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ । बेलायतको लण्डनस्थित साउथ ह्यारोमा धादिङ नुवाकोट समाजले विशेष भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन । बिगत ११ बर्ष देखी कृयाशिल यस संस्था केहि बर्ष देखी अत्यन्तै सकृय र सृजनशीलरूपमा बेलायतमा अग्रणी सामाजिक संस्थामा लिईन्छ! यस्को गत ३/४ बर्षको कार्यक्रमको फेहरिस्तीले सो कुराको पुनर्पुष्टी गर्छ! कार्यक्रममा धादिङ र नुवाकोटमा जन्म भई बेलायतलाई मुल कर्मथलो बनाएर बसोवास गर्नेहरुको ठुलो संख्यामा उपस्थिती रहेको थियो ।
भेटघाट कार्यक्रममा धादिङ नुवाकोट समाजका अध्यक्ष चोक तामाङले आफ्नो जन्मभुमिको सम्झाना र सम्मानका खातिर समाज गठन भएको र यसले धादिङ र नुवाकोटेहरुलाई भावनात्मक एकताको कसीमा ल्याएको बताउनुभयो । समाजले मुलतः जन्मभुमिप्रति सदैव इमान्दार भएर सम्मान गर्ने काम गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बेलायतका लागि राजदुत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले यस्ता कार्यक्रमहरुले आफु जन्मेको माटोलाई सदैव सम्झाउने र जिम्मेवारी बोध गराउने बताउनुभयो । यसले आफु जन्मेको ठाउँलाई विर्सन नदिने र सधै उन्नतीको पथमा अगाडी डोर्याउने प्रेरणा दिने बताउनुभयो । उनी अझै भाबुक हुंदै आफ्नो यो समाजको मौलिकता र कृयाशिलता तथा भावनात्मक अपनत्वले ब्यस्त कार्यतालिकालाई थाती राख्दै यहांहरुको साथमा रहन आएको बताए ! कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता तथा एन आर एन आई सी सी सदस्य तथा समाजका सल्लाहकार रामशरण सिम्खडाले धादिङ नुवाकोट समाजले दुई जिल्ला भौगोलिक, राजनीतिक र सामाजिक बिबिधतालाई चिर्दै एकअर्कालाई एकाकार गरेकोले यसको महत्व छुट्टै रहेको बताउनुभयो । यस्तो प्रकारको संस्थाहरुले अखण्डतालाई विशेष ध्यान दिदै सामारिक महत्व समेत राख्ने बताउनुभयो । उनले आफ्नै चिरपरिचित मौलिक शैलीमा घोड़ा र खसी को कथा सुनाउंदै सामाजिक अभियान बिना स्वार्थ आफ्नो मातृभूमी प्रतिको कर्तब्यबोधका लाग्न समाजलाई बिषेश अनुरोध गरे !
कार्यक्रममा जोनमोर यूनिवर्सिटी का एसोसियट डिन प्रा डा पदम सिमखडा, पत्रकार महासंग यूके शाखाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुब राज अर्याल, मेन्दोमाया परिवारका अध्यक्ष हरिसिं वाईबा, मे (री) बिष्णु घले, तमुधी यूके अध्यक्ष ज्ञाम गुरूड्गले समाजको बिबिध आयामबारे प्रकाश पार्दै मन्तब्य राख्नु भएको उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य उपाध्यक्ष दीप ब तामाड्गले गरेका थियो भने उत्कृष्ट संस्कृतिक कार्यक्रमको संयोजन र संचालन अर्की उपाध्यक्ष देबी रानी गुरूंगले गरेकी थिईन ! जिल्लाको सामाजिक काममा सहयोग पुर्याउनु भएका बिभिन्न संघसंस्था तथा महानुभावहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ! कार्यक्रममा ४ सयको हाराहारीमा धादिङ–नुवाकोट वासीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिक मिना लामा र नायिक छुल्ठिम गुरुङको प्रस्तुतिले सबै सहभागिको मन जितेको देखिन्थ्यो । कार्यक्रममा सहभागी अधिकॉसले यस्तो भब्य, सभ्य र सुब्यबस्थीत कमै कार्यक्रम हुंने हुदा भरपुर मनोरंजनको साथै आत्मिएता बाडिएको प्रतिकृया दिए !
Page visited 22297 times